San Htun's Diary: May 2012
နေ့ လည်စာ ထွက်စားခဲသည့် မေ ပထမဆုံး နေ့ လည်စာထွက်စားသည့်နေ့ မှာပင် သူနှင့် ဆုံတွေ့ ခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများကြား တဦးတည်း ဖြစ်နေသည့် မေ့ကို အရေးတယူ ရှိရှာသည်။ မြန်မာစကားပြောတတ်သလားဟု မေးလာသည့်အခါ ပြောတတ်တာ သိပ်သေချာတာပေါ့ဟု ဆိုသောအခါ သူ ကျေနပ်စွာ ပြုံးနေခဲ့သည်။
သူသည် မေတို့ ရုံးက မဟုတ်ပါ။ မေနှင့် ဌာနချင်းတူသော တူရကီလူမျိုး မူဆာဖာ၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည့် မူဆာဖာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည့် သူတို့ဆုံတွေ့ ရာမှ မေနှင့် သိကျွမ်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မြန်မာလူမျိုး မိသားတစုကို ကူညီနေတာ၊ မေများ တွေ့ ချင်မလားဟု မေးလာသောအခါ ကိုယ့်လူမျိုးနှင့် မတွေ့ တာ ကြာပြီဖြစ်သည့် မေ ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိသော သူများအတွက် ဘာသာပြန်ပေးခြင်း၊ ကလေးငယ်များနှင့် ဆော့ကစားခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခြင်းဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း မေနှင့်သူ ဆုံဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေး၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ ရန်ပွဲ၊ သေနတ်ပစ်၊ ခုနစ်လွှာချွှတ်ကလပ်များရှိသည့် ထိုရက်ကွက်သို့တယောက်တည်း မသွားရဲသည့် မေ့ကို သူက လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး ပြန်ပို့ ပေးရသည်။
ဆိုမားလီးယား၊ ကျူးဘား၊ နီပေါ၊ ဘူတန် ကလေးငယ်များသည် သူလာမည့်အချိန်ကို စောင့်နေတတ်သည်။ ဆိုမားလီးယား မိသားစု အများစုတွင် ကလေးငယ်များ၏ ဖခင်များက မလိုက်လာဘဲ သူတို့ တိုင်းပြည်တွင် ကျန်နေခဲ့သည်။ ထို့ ထက် ဘာမှ မသိရဟု သူပြောပြသည်။ ကလေးငယ်များနှင့် ဆော့ကစားနေသော သူ့ ဟန်ပန်၊ အသားအရောင်၊ အဆင့်အတန်း မခွဲခြားဘဲ တလေးတစား ပြောဆိုဆက်ဆံသော သူ့ ဟန်ပန်က မြင်ရသူကို အေးချမ်းစေသည်။ သူ့ အချိန်အားလုံးကို သာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက် မြှပ်နှံထားသူ ဖြစ်သည်။
သူနှင့်မေ မတူညီတာတွေ တော်တော်များသည်။ သူက ထမင်းမကြိုက်၊ မေက ပေါင်မုန့် လုံးဝမကြိုက်။ သူက အရက်မကြိုက်၊ မေက ဝိုင်ကြိုက်သည်။ သူက ဝိုင်းဒိုင်းကြဲ ပေါက်ကွဲတတ်သော သီချင်းကြိုက်သည်၊ မေက သီချင်းစာသားမပါ တီးလုံးသက်သက် သီချင်းတွေ ကြိုက်သည်။ မေ့သီချင်းကလည်း ပျင်းစရာကြီးဟု ဆိုသောအခါ ရှင့်သီချင်းကလည်း နားကွဲမယ့်သီချင်းဟု ဆိုတတ်သည်။ ရာသီဥတုပူတာ အကြောင်းပြ၍ မေက အတိုတွေ ဝတ်သော်လည်း သူကတော့ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ဆင်တတ်သည်။ မေက အရောင်တောက်တောက် ကြိုက်သလောက် သူကတော့ မှုန်မှိုင်းသောအရောင်ကြိုက်သည်။ သူက coke ကြိုက်သလောက် မေကတော့ Green Tea ကြိုက်သည်။
သူက ယောက်ျားလေးမဆန်စွာ အသားအရည် ဝင်းမွတ်နေပြီး မေကတော့ ငယ်ငယ်က သောင်းကျန်းထားသည့် ဒဏ်ရာအမာရွတ် ဗလပွနှင့် ဖြစ်သည်။ သူ့ လက်ကလေးများက စန္ဒရားပညာရှင်လက်လို သွယ်ပျောင်းနေပြီး မေကတော့ မိန်းကလေး မဆန်စွာ မနူးညံ့သူ ဖြစ်သည်။ မေ့ကားဘေးမှ အသီးသီး ကျော်တက်သွားသည့် ကားများကို ကြည့်ကာ မေ ဖော်မြူလာဝမ်းကားမောင်းပြိုင်ပွဲ ဝင့်သင့်သည်ဟု မှတ်ချက်ပေးတတ်သည်။ ရှိသမျှ ကားအားလုံးကို ကျော်တက်သည့် သူ ကားမောင်းလျှင်တော့ မေ ဘုရားတနေတတ်သည်။
မေကတော့ ကလေးဆိုလျှင် မိန်းကလေးကို ပိုချစ်သည်။ ပြောဆိုရလွယ်၊ မျောက်ရှုံးအောင် မဆော့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူကတော့ ကလေးဆိုလျှင် ယောက်ျားလေး ပိုချစ်သည်။ ယောက်ျားလေးက အကုန်အကျ သက်သာသည်။ အင်္ကျီတစုံ၊ ဖိနပ်တရန်ဆို ပြီးရော။ မိန်းကလေးဆို အင်္ကျီဆယ်စုံ၊ ဖိနပ်ဆယ်ရန်၊ အလှပြင်ပစ္စည်းများနှင့် ရှုပ်နေတာပဲဟု အသံနေအသံထားဟု လုပ်ပြသောအခါ မေ သဘောကျစွာ ရယ်မောခဲ့ရလေသည်။
အမြဲတည်ငြိမ်အေးဆေးနေတတ်သော်လည်း တခါတရံတွင်တော့ သူသည် ခေတ်လူငယ်လေးတယောက်လို ပေါ့ပါးနေတတ်သည်။ သူအကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားမှ ကလေးတွေ၏ တုံ့ ပြန်မှုအပြုံးကို ရသော်လည်း မေကတော့ ခဏလေးနှင့်ပင် ကလေးတွေ၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကို ရတတ်သည်။ ကလေးများသည် မြန်မာစကားပြောသော မေ့ကို သူတို့ လူမျိုးဟု သိကြဟန်တူသည်။
ထိုင်းကမ့်မှာက အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိဘူး၊ မလေးမှာက အလုပ်လုပ်၊ အပြင်ထွက်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုသည့် ခွဲခြားမှုများ၊ ၅၀ခန့် ရှိသည့် လူဦးရေအတွင်း ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင် ခွဲခြားနေမူများ၊ အာလူးကြော်စက်ရုံ၊ ငါးစက်ရုံ၊ ဝက်သတ်စက်ရုံ၊ မွေ့ ယာစက်ရုံများတွင် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်းရမှုများ၊ ဘာသာစကား၊ ရာသီဥတု၊ အစားအသောက် အခက်အခဲမျိုးစုံကို နားထောင်ရင်း မေ ရင်မောမိသည့်အခါလည်း ရှိသည်။ အစိုးရက အထောက်အပံ့ပေးသော်လည်း မကြိုးစားသူများကို မြင်ရသောအခါ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိသည့်အခါလည်း ရှိသည်။
ဒုက္ခသည်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ အခွင့်အရေးက အတော်ရတယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်၊ အိမ်၊ အစားအသောက် ဖရီး၊ ကျောင်းတက်မလား အကုန်ထောက်ပံ့တာ။ တပြားမှ မကုန်ဘူး ဆိုသောအခါ ပိုက်ဆံအမြောက်အမြား အကုန်ခံပြီး ဒီနိုင်ငံတွင် ကျောင်းလာတက်ရသော မေ့ခမျာ မချိပြုံးသာ ပြုံးနိုင်သည်။ တချိန်ကျရင် အဲဒီ ဖရီးဆိုတာတွေ၊ ထောက်ပံ့ထားတွေ ပြန်ဆပ်ရမည်၊ ပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှ ပိုက်ဆံပိုရသော၊ သူတို့ တိုင်းပြည်မှဘွဲ့ ကိုသာ ဦးစားပေးသော ဒီနိုင်ငံအကြောင်း တနေ့ တော့ နားလည်အောင် မေ ရှင်းပြနိုင်မည် ထင်ပါသည်။
သူတို့ နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မေ့ဒုက္ခမှာ စာဖွဲ့ ဖွယ်မရှိ။ သေချာသည်ကတော့ မေ အရင်ကလောက် မညည်းညူတော့ခြင်းပင်။ စိက်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေသည့် မေ့ကို သူက အားပေးတတ်သည်။ ကိုယ့်လောက် မပြည့်စုံသူများကို စာနာနားလည်တတ်အောင် တနင်္ဂနွေနေ့ ရက်များက သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မေ့အတွက်တော့ တနင်္ဂနွေနေ့ ရက်များသည် ဘဝကျောင်း တက်ရသလို အချစ်ကျောင်းလည်း တက်နေသည်။
သူ့ ခံစားချက်ကို အမြဲဖုံးကွယ်နိုင်သော်လည်း မေကတော့ မေ့ ခံစားချက်မှန်သမျှ မျက်နှာပေါ်တွင် ထင်းထင်းကြီး ထင်ဟပ်နေတတ်သည်။ မေ သိပ်ဟန်ဆောင်ကောင်းတာပဲဟု ပြုံးစစဖြင့် သူက မှတ်ချက်ပေးသည်။ သူက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူဖြစ်ပြီး မေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ သင်မလားဟု မေးတိုင်း တွေဝေတွန့် ဆုတ်ခြင်းမရှိ မေက ခေါင်းခါသလို ပဋ္ဌာန်းကျမ်းသင်မလားဟု မေးသောအခါ တွေဝေတွန့် ဆုတ်ခြင်းမရှိ သူ ခေါင်းခါသောအခါ မေတို့နှစ်ယောက် ပြိုင်တူရယ်မောခဲ့ရဖူးသည်။
လူမျိုးခြားတွေကြား တယောက်တည်း အထီးကျန်စွာ နေရသည့်အဖြစ်ကို သူ ကိုယ်ချင်းစာသည်။ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်းမှ အပြန် တခါတလေ ရေကန်ဘေးတွင် မေတို့ ထိုင်ပြီး စကားပြောတတ်သည်။ တခါတလေ ရေကန်ဘေးနား လမ်းလျှောက်သည်။ တခါတလေ စက်ဘီးစီးကြသည်။ တခါတလေ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းလက်နေသည့် ကြယ်လေးတွေကို ရေတွက်ကြသည်။ မေ့ကတော့ သံယောဇဉ်ကြိးတိုးရစ်လာသော်လည်း သူ့ ကိုတော့ ခန့် မှန်းရခက်သည်။ သူသည် ခံစားချက်ကို တခြားသူ မမြင်အောင် ဖုံးကွယ်ရာ၌ အတော်ပိရိလွန်းသည်။
ကားလာသည်ကို မမြင်ဘဲ ဖြတ်ကူးနေသည့် မေ သူ့ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲ ခဏ ရောက်သွားချိန် လောကကြီးတခုလုံး ဘာသံမှ မကြားရအောင် တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့သည်။ မော့ကြည့်လိုက်စဉ် ချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့သည့် မျက်ဝန်းလဲ့ပြာပြာကို မြင်တွေ့ လိုက်သော်လည်း ခဏသာဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ ကတော့ အပြန်လမ်းတွင် စကားသံတွေ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိတ်သုဉ်းနေခဲ့သည်။
နေ့ တာတို၍ ညတာရှည်သော ဆောင်းနေ့ ရက်များတွင် ညနေ၅နာရီဆိုသည်နှင့် အလင်းရောင် မရှိတော့။ လူပြတ်သော လမ်းကြားလေးမှ သွားမိသော မေ လူရမ်းကားလေး သုံးယောက်နှင့် ရင်ဆိုင်မိသောအခါ ထိတ်လန့် တုန်ယင်သွားခဲ့သည်။ အားတင်းကာ ဘာမှမဖြစ်သလို ရှေ့ ဆက်မည်ကြံသော်လည်း လမ်းပိတ်ထားသည်။ သူ့ ဆီ ဖုန်းခေါ်တော့လည်း လိုင်းမအား။ တမိနစ်အတွင်း ရောက်လာမည့် ရဲကား မလာမှီအချိန်အထိ ဒီကလေးတွေကို မေဟန့် တားနိုင်ရမည်။ သူတို့မေ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို လိုချင်တာ ဖြစ်ရမည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကို သူတို့ နား ပစ်ပေးလိုက်သည်။ တယောက်က ကောက်ကိုင်လိုက်သော်လည်း နောက်နှစ်ယောက်က ရှေ့ တိုးလာသည်။ ဘုရားရေ... လူကို အန္တရာယ် ပေးမလို့ ပါလား။ အသံကုန်ဟစ် အကူအညီတောင်းလျှင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကြားနိုင်ကောင်းတယ် ထင်ပါရဲ့ ။
သူ့ အသံကို ကြားရသည်နှင့် မေ လုံခြုံစိတ်ချသွားသည်။ သူ့ ရင်ခွင်မှာ မျက်နှာအပ်ရင်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးမိသည်။ မေ့မျက်ရည်တွေ သုတ်ပေးရင်း နောက်နောင် ဒီလိုမျိုး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေရဟု ကတိပေးသည်။ မလွတ်တမ်း ဖက်ထားသောအခါ မေ့ နဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းရင်း နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့ မှ စ၍ စောစော ပြန်ဖို့မေ့ကို သတိပေးနေတတ်သလို ညနေမိုးချုပ်ထိ နေရလျှင် မနီးမဝေးကနေ စာင့်ရှောက်နေတတ်သည်။
မေတို့ နှစ်ယောက် တယောက်ကိုတယောက် သံယောဇဉ်ရှိကြမှန်း သိသော်လည်း တယောက်ကို တယောက် မဖွင့်ဟခဲ့။ သာသနာပြုနေသော သူ့ အတွက် ဘာသာမတူသော မိန်းမတယောက်ကို လက်ထပ်ခြင်းသည် ကြီးကျယ်သော စွန့် လွတ်မှု ဖြစ်သည်။ ဘာသာတူ၊ လူမျိုးတူကိုသာ ယူစေချင်သော မေ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားတွင်လည်း ကြီးကျယ်သော စွန့် စားခန်းဖြစ်သည်။
သာသနာပြုခရီးအတွက် သူ ထွက်ခွာသောအခါ လေယာဉ်ကွင်းကို မလိုက်ပို့ ဖို့တောင်းဆိုလာသည်။ မေ့မျက်နှာကို မြင်လျှင် သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ယိုင်လဲသွားမည်ကို သူ စိုးရိမ်ဟန်တူသည်။ အချစ်ထက် ရည်မှန်းချက်၊ တာဝန်ကို ပိုချစ်သောသူတယောက်ကို ချစ်မြတ်နိုးရခြင်းသည် ပို၍ လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းသည်။ ဘာကတိစကားမှ မခွန်းဟသော သူတယောက်ကို တွယ်တာရခြင်းသည် ပို၍ ဆွတ်ပျံ့ ဖွယ်ကောင်းသည်။
များမြောင်လှသော တာဝန်များကြား သူ မေ့ကို မေ့လျော့နေဟန် တူသည်။ ဖေ့ဘွတ်တွင် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့် က ဓာတ်ပုံများကိုသာ တင်တတ်သော၊ ဘယ်တော့မှ အပ်ဒိတ် မလုပ်တတ်သော၊ ရံဖန်ရံခါမှ တွတ်တာတွင် တွတ်တတ်သော သူ့ စကားလုံးများကို စောင့်မျှော်ရသူအဖို့ကြာရှည်လှသည်။ ချစ်ရသူ ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသော စကားလုံးများကို မြင်တွေ့ ရသည်မှာ ချစ်မြတ်နိုးရသူကို တွေ့ ရသည့်ပမာ ကြည်နူးရသည်။
သူ့ ခေါ်သံကို ကြားလိုက်ရသည့်ခဏ မေ လန့် နိုးလာခဲ့သည်။ သူများ မေ့ရှေ့ မှောက် ရောက်နေမည်လား။ ဟင့်အင်း... မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိုင်ပေါင်းများစွာ အဝေးကြီးကနေ သူ မေ့ဆီ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ရောက်မလာနိုင်ပါ။ မေ့လည်ပင်းမှာ ဆွဲစေချင်သော်လည်း စာကြည့်စားပွဲ အံဆွဲလေးထဲတွင် သိမ်းထားသော လက်ဝါးကပ်တိုင်လေးကို သူ့ ကို သတိရ၍ ထုတ်ကြည့်နေကျအတိုင်း မေ ထုတ်ကြည့်မိသည်။
ဆက်အိပ်၍ မပျော်တော့သည့်အတွက် ဘုရား သောက်တော်ရေ၊ ဆီမီး၊ သစ်သီး၊ ပန်းကပ်ကာ သူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ဆုတောင်းသည်။
မနက် ၇နာရီကျော်မှ အိပ်ယာထတတ်သည့် မေ့အကြောင်း သိသည့်မိတ်ဆွေများက မနက်၇နာရီကျော်မှ ဖုန်းခေါ်တတ်သော်လည်း ဒီနေ့ တော့ ထူးဆန်းစွာ စောစောစီးစီး ဖုန်းမြည်လာခဲ့သည်။
ဟယ်လို မေ စကားပြောနေပါတယ်...
အဖြူရောင်မျက်နှာကြက်ကို တွေ့ ရသည်။ ငါ ဘယ်ဆီကို ရောက်နေပါလိမ့်။ အမြင်အာရုံ တဖြည်းဖြည်း ကြည်လင်လာသည်။
မေ... သက်သာရဲ့ လားဟင်...
စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့် မျက်နှာများကို တွေ့ ရသည်။
မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းသည် အိမ်မက်သာ ဖြစ်ပါစေဟု မေ ဆုတောင်းမိသည်။ ပတ်တီးအဖွေးသားနှင့် သူသည် အရင်အတိုင်း မပြောင်းမလဲ။ အိပ်ပျော်နေသည့်အလား။
မေ ငိုချင် ငိုချလိုက်..ချုပ်မထားနဲ့ ...
စိတ်နှလုံးမသာယာဖွယ်များကို ကြားရတိုင်း မျက်ရည်ဝဲတတ်သော၊ ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ရင်း ငိုတတ်သော၊ အသည်းငယ်လိုက်တာဟု သူ တခါက ပြောဖူးသော မေ ဒီတခါတော့ မျက်ရည် ခန်းခြောက်နေခဲ့သည်။
မေ့ကို ဒါလေး ပေးချင်ခဲ့တယ်နဲ့ တူတယ်..သူ့ လက်ထဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတယ်..
ပလက်တီနမ် ဆင်တူ လက်စွပ်တစုံ...
မေ နောက်ထပ်မျက်ရည်တွေ မကျန်တော့လောက်အောင် ငိုကြွေးမိသည်။ ဘယ်ဖက်ရင်အုံဖက်က တဆစ်ဆစ် နာကျင်နေသည်။ သေခြင်းတရားသည် လူကောင်းများအတွက် အချိန်မနှေးသော်လည်း မကောင်းသည့်သူများအတွက် နောက်ကျနေတတ်သည်။
သူကိုယ်တိုင် ဝတ်ဆင်မပေးခဲ့သော်လည်း မေ့လက်တွင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် လက်စွပ်လေးနှင့် ဆင်တူစွာ လည်ပင်းတွင် ဆွဲထားသည့် ပိုင်ရှင်မဲ့နေသည့် လက်စွပ်လေးကို သတိထားမိသူများကတော့ ထိုပုံစံတူ လက်စွပ်လေးတစုံ၏ ရာဇဝင်ကို သိလိုကြသည်။ ချစ်ခွင့်ပန်လာသူတိုင်း လက်စွပ်လေးပြကာ မေ ငြင်းပယ်နေခဲ့သည်။
ပန်းရောင်စုံ ဖူးပွင့်ကာ သာယာလှပသော နွေဦးကာလတွင် ကျရောက်သော သူ့ မွေးနေ့ တိုင်း တော်ဝင်ပန်းများထက် လမ်းဘေးအလေ့ကျပေါက်သော ပန်းများကို နှစ်သက်သော မြေကြီးဆန်သူတယောက်အတွက် ပန်းစည်းတခြင်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် မေ သွားရောက်ပို့ နေတတ်သည်။ မှတ်မှတ်ရရ သူ မေ့ကို ပန်းစည်းလှလှ မပေးဘူးပါ။ လမ်းဘေးအပင်မှ ပန်းကို နှုတ်ယူကာ မေ့အတွက်ဟု နောက်ပြောင်ကာ ပေးခဲ့ဖူးသည်။
ဘဝဆက်တိုင်း သေကွဲခြင်း ကင်းကွာ၍ ဆုံစည်းခွင့်ကို ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ထံတွင် မေ ဆုတောင်းမိသလို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးသောအချစ် ဖြစ်ပါစေဟု သူ ယုံကြည်သော ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းမိသည်။ မေ့ရင်ထဲ သူ့ ကို မေ့ပျောက်နိုင်သည့် တချိန်ချိန် ပိုင်ရှင်ထံသို့ လက်စွပ်လေးကို ပြန်ပေးကောင်း ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ စိတ်ထားမွန်မြတ်သော သူ ကောင်းကင်ဘုံမှ ကျေနပ်စွာ ပြုံးနေလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
မေ ၂၅၊ ၂၀၁၂။
(ဓာတ်ပုံများကို ဂူဂယ်မှ ရယူပါသည်။)
ရက်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၂
ဒီတပတ်တော့ စန်းထွန်းတယောက် အူစိုနေပါတယ်။ အမေကြော်ပေးလိုက်တဲ့ ငံပြာရည်ကြော်၊ မကြီးထည့်ပေးတဲ့ ဆီးသီးပေါင်း၊ မခိုင် ကားကြုံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ သစ်တိုသီး ငါးပိချက်၊ ငါးပိထောင်း၊ ဆီးထုပ်၊ သရက်ပေါင်း... အောင်မလေး ပြောရင်းနဲ့ တောင် စားချင်လာပြီ ရှလွတ်..။ ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့တီးတာ ထမင်း နှစ်ပန်းကန် ကုန်တယ်။ ချဉ်ပေါင်ကြော်မစားရတာ နှစ်ပေါက်နေပြီကိုး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရသာအရှိဆုံးက မြန်မာအစားအသောက်။ တကယ် ကြောတာ။ ရွှေပန်းပွင့်ဟင်းချို သောက်တာတောင် ပိုးကောင်နံ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်တွေ ငါးပိရေကျိုလို့ ကတော့ အင်း...ထွက်ပြေးမှာ သေချာတယ်။
အခုလာမယ့် သောကြာနေ့ မှာတော့ မိုင်းတယောက် အိုင်ဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီကနေ မိုင်ရှစ်ရာ အဝေးမှာရှိတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံ Quebec ပြည်နယ်အောက်ဖက်က ဗာမွန်ပြည်နယ် ဘာလင်တန်ကို ပြောင်းရွှေ့ ပါတော့မယ်။
A - San Htun, Louisville, Kentucky
B - Sunam, Cincinati, Ohio
C - Mai Pham, Burlington, Vermont
D - Rama, Boston, Massachusetts
Burlington မြို့က Lake Champlain နားမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီရေချိုကန်ကြီးက Lake Monster လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ရေကန်ထဲမှာ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ သတ္တဝါတကောင်တွေ့ ခဲ့တယ်လို့၁၆၀၂ခုနှစ်ကတည်းက မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ခုထိလည်း တခါတရံ တွေ့ ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုသတ္တဝါဆိုတာတော့ ခုထိ သေသေချာချာ ဂဃနဏ မသိသေးပါဘူး။
မိုင်းက ခြောက်နှစ်ကြာမျှ ဒိတ်ခဲ့တဲ့ ကျူဟိုင်းနဲ့ရွှေလက်တွဲပါတော့မယ်။ ကျူဟိုင်းဆိုတာ ဗီယက်နမ်လို အန်ကယ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မိုင်းက ကျုဟိုင်း (အန်ကယ်)လို့ခေါ်ပြီး ကျူဟိုင်းက မိုင်းကို အန်းဟိုင် (အန်တီ)လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်ကွယ်မှာတော့ ဂျာရစ်လို့ချစ်စနိုး ခေါ်ချင်ခေါ်မှာပေါ့လေ..:P။ မိုင်းက သူအင်္ဂလိပ်နာမည် ပြောင်းချင်လို့ တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဟ မိုင်းဖန်ဆိုတဲ့ နာမည်က လှသားပဲဟာကိုနဲ့မိုင်းက အဆိုတင်သွင်းတာကို ဆူနမ်နဲ့စန်းထွန်းက ကန့် ကွက်ပါတော့တယ်။ ကျူဟိုင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင် ကျူဟိုင်းမိသားစုနာမည်ကို ပြောင်းရမှာမို့ လို့ တဲ့။ ဟုတ်တော့ဟုတ်သား Mai Lai မိုင်းလိုင်းဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးက ရယ်စရာကြီး။ M နဲ့ စပြီး Lai နဲ့ လည်း လိုက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်နာမည်လှလှလေး မိုင်းအတွက် ဝိုင်းရွေးပေးကြပါဦးနော်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားက မင်္ဂလာဆောင်ကို Asmita မန်ချေးတို့နွှဲတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မြင်ရတော့မှ နီပေါတွေ ရွှေကြိုက်မှန်း သိတော့တယ်။ မန်ချေးဆိုတာ နီပါလီလို လူသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဆူနမ်က Asmita မန်ချေး ခေါ်တော့ ကိုယ်တွေလည်း မန်ချေးတာပေါ့။ အစိမ်းရောင်စလွယ်သိုင်းမှာပါတဲ့ ရွှေတုံးဆို တော်တော်လေးတာတဲ့။ ဒင်္ဂါးဝိုင်း ၃၂ ပြားကို သီထားတဲ့ ဆွဲကြိုးကို တွေ့ တော့ ကိုယ်တွေမှာ အံ့တွေသြလို့မလေးဘူးလားဟင်ပေါ့။ လေးတော့လေးတာယ် ဒါပေမယ့် မလေးဘူးတဲ့..:P ။ ပွဲလမ်းတွေမှာ ရွှေတွေ အတုံးလိုက်၊ အတစ်လိုက် ဝတ်ရတဲ့ဓလေ့ကို ဆူနမ်က နှာခေါင်းရှုံ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။
မွန်ဂိုလူမျိုးစုကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ Gurung စစ်သားမျိုးနွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိပြီး ၆၄ အုပ်စု ရှိပါတယ်။ ၄ အုပ်စုကိုတော့ အဆင့်မြှင့်အုပ်စုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Which Gurung are you ? လို့မေးတော့ ဆူနမ်က I don't know. I am Gurung.ပါတဲ့။ သူကိုယ်တိုင် ဘာ Gurung မှန်း မသိတဲ့ ဆူနမ်ပါ။ ဆူနမ်ပြဖူးတဲ့ Gurung ရိုးရာဝတ်စုံလေးပါ။
Gurung တွေရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံ
မိုင်း ပြဖူးတဲ့ ဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံလေးပါ။ ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့ ဒါလေးသာ ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်ရင် သိပ်မိုက်မှာပဲလို့တွေးကြမလားမသိဘူး။
အဲဒီဝတ်စုံလေးက ပိုရှေးကျပေမယ့် အမြင်နည်းနည်းရိုင်းတယ်ထင်လို့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာ ဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံကို အထင်မသေးချင်တာကြောင့် အောက်ကဝတ်စုံလေးကိုပဲ ဗီယက်နမ်ရိုးရာဝတ်စုံအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီဝတ်စုံလေးက မဖော်ပေမယ့် လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကျက်သရေရှိရှိ လှပတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ဖော်မှ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလို မဖော်တာကိုက ဖော်တာထက် ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြန်တယ်။
နီပေါမှာ Living God ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ God ဝင်စားတဲ့ ကလေးမတွေဟာ အသက် ၂နှစ်ကနေ ၅ နှစ်ကြား ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၂မျိုး စစ်ဆေးပြီး God အဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းမှာ ခေတ်ပညာသင်၊ နတ်တွေ ပူဇော်ပသ ကုမာရီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ နေရပါတယ်။ ယုံကြည်သူများက Kumari ကို ရှိခိုးကြပြီး ဆုတောင်းကြပါတယ်။ ပထမဆုံးရာသီသွေးလာတာနဲ့ကုမာရီအဆင့်ကနေ လျှောကျပြီး နောက်ထပ် ကုမာရီတယောက် ရွေးချယ်ပါတယ်။ ကုမာရီကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေက ဆူနမ်တို့ မျိုးနွယ်စု မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားမျိုးနွယ်စုပါ။
တနင်္လာနေ့ ဆို Monday Blue ၊ သောကြာနေ့ ဆို Friday ဆိုပြီး သူတို့ နိုင်ငံသားတွေကတော့ ဘလူးနိုင်ကြပေမယ့် ကိုယ်တွေကတော့ မဘလူးနိုင်ပါဘူးဂျာ။ နိုင်ငံခြားသားဆိုတာ သူတို့ လို နိုင်ငံသားတွေထက် ပိုကြိုးစားမှ ကိုယ့်နေရာလေး မြဲမှာမလား။ အလုပ်ကနေ ပြန်ရောက်ရင် ခေါင်းတွေ ပွင့်ထွက်သွားမလား ထင်ရအောင် ကိုက်နေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကလည်း ဘာမှ မလုပ်ရှားရဘူး။ ကွန်ပျူတာကြီးကို တနေကုန်ထိုင်ပြီး တစိမ့်စိမ့် ကြည့် ..စဉ်းစားရတာကိုး။
စလုံးရောက်မှ ဆံပင်သုံးချောင်းဖြူတော့ မကြီးက ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်တယ်။ တသက်လုံး အသုံးမချခဲ့တဲ့ ငါ့ညီမခေါင်း ခုတော့ အသုံးချနေပြီ ဆိုပြီးတော့။ ညာဖက်အပေါ်မျက်ခွံလှုပ်ရင် ဘာဖြစ်လဲ မကြီးရေ ဆိုတော့ အဲဒါ လာဘ်တဲ့။ တပတ်နီးပါးလှုပ်နေတာ့ နင့်ဟာက လာဘ်မဟုတ်တော့ဘူး။ အာရုံကြောအားနည်းတာဖြစ်မယ်။ ဆေးသောက်ဆိုတော့မှ နူယိုပီယမ်အနီရောင် သောက်နေရတယ်။ မသိတဲ့သူတွေကတော့ စန်းထွန်းတယောက် ဘိုလေးတွေကို မျက်စပစ်ပြနေတယ်ထင်မယ်။ ဘယ့်နှယ့် ဘိုချောချောလေးတွေကို မျက်စမပစ်ဘဲ Gray Hair တွေကို မျက်စပစ်နေပါလိမ့်။ ကိုယ်တို့ ဌာနမှာလည်း ပစ်စရာ Gray Hair တွေပဲ ရှိတာကိုး။
စလုံးရုံးမှာတုန်းက Single ဆိုလို့ကိုယ်နဲ့ထိန်ထိန် နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့ ထိန်ထိန်က ဒီလို အကြံပေးတယ်။ စန်းစန်းရေ ဒီရုံးမှာတော့ ငါတို့ စွံကိန်း မမြင်ဘူး။ ရည်းစားမရှိတဲ့ ကောင်လေးတွေများတဲ့ ရုံးကို ပြောင်းမှ ဖြစ်မယ်တဲ့။ ခုလည်း ဘိုချောချောလေးတွေရှိတဲ့ Thermal ၊ I & C ဌာနကို ပြောင်းလို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဂျာ..D။
စပိန်ကုမ္ပဏီ Initec Energia မှ MPX ကုမ္ပဏီအတွက် ဘရာဇီးတွင် တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးသော Parnaiba ပရောဂျက်၊ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Siemens မှ စင်္ကာပူတွင် တည်ဆောက်သော Tuas ပရောဂျက်အတွက် Celebration Lunch ကို မေ ၁၁ သောကြာနေ့ က ရုံးမှာ ကျင်းပပါတယ်။ စင်္ကာပူအစားအစားတွေဖြစ်တဲ့ ကြက်ဆီထမင်း၊ ကြာဇံကြော်၊ တောင်အမေရိကအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ အရွက်စုံသုပ်၊ အာလူးကို မက်ရွန်းနစ်နဲ့ သုပ်၊ ဘာပဲမှန်းမသိတဲ့ ပဲ၊ အသားကင်၊ အချိုပွဲအတွက် ချောကလက်ကိတ်၊ ငှက်ပျောသီးပေါင်းတွေ ကျွေးတာ စားကောင်းသဗျား။ ကြက်ဆီထမင်းကတော့ Americanzied ပြုထားတယ်။ ဆန်လုံးကြီးကြီးနဲ့ ။ မကျေပွဲ နှစ်ခေါက်နွဲတယ် ခင်ည..:P။
Singapore & Sourth American food
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပင်ပန်းတယ် အားမရှိဘူးဆိုပြီး စားတာများ Diet လုပ်နေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ မျက်လုံးပြူးတယ်။ တနေ့ ကယ်လိုရီ ၅၀၀ စားပြီး Diet လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှေ့ မှာ ကယ်လိုရီ ၅၀၀ရှိတဲ့ ကိတ်မုန့် တုံးကြီးကို မနက်စာအဖြစ် တထိုင်တည်း စားထည့်လိုက်လို့ လေ။ သူ့ သမီး ပင်ပန်းတယ်ဆိုလို့အမေကလည်း ပြောရှာတယ်။ စားသာစား သမီး။ အစားအသောက်ကို လုံးဝ မချွှေတာနဲ့ ။ အားရှိအောင်စားပြီး ကျန်းမာအောင် နေ။ သူငယ်ချင်းတွေဆီလည်း သွားလည်။ ပျော်အောင်နေတဲ့။ ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အမေလဲ။ ဟုတ်ကဲ့ အမေ့စကား နားထောင်ပါတယ် ခင်ည။ Centrum အားဆေးသောက်ပြီး နင်းကန်စားနေပါတယ် ခင်ည။
အလုပ်နဲ့အိမ်၊ အိမ်နဲ့ အလုပ်၊ ဘယ်မှလည်း မသွားဘဲ၊ ဘာတွေလို့မယ်မယ်ရရ ပြစရာမရှိဘဲ မအားတာများ အမေရိကန်ရောက်မှ အမေရိကန်အိုင်ဒေါ မကြည့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်။ ကျောပိုးအိတ်၊ Laptop၊ စာအုပ်တွေနဲ့မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတဲ့ စန်းထွန်းကို မနေနိုင်တဲ့ အတန်းဖော် Oyeyemi က San San, let me help you. လို့ဆိုလာတော့ No. Thanks လို့ငြင်းပါတယ်။ You become American. လို့ဆိုလာတော့ ပြုံးမိသေးတယ်။ ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်ရပါမယ်။ အားနွဲ့ သူပါရှင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ငါဟဲ့ မိန်းမ လုပ်ရပါမယ်။
နွေရောက်လာပြီမို့နည်းနည်းပူလာပါပြီ။ နွေဦးတုန်းက ပန်းတွေနဲ့မတူပြန်ဘူး။ သရက်ပွင့်နဲ့တူပါတယ်။ အနံ့ က တော်တော်မွှေးအီတယ်။
နှင်းဆီးရဲရဲတွေလည်း လှတယ်။ ဒါပေမယ့် မမွှေးဘူး။
တနေတာရဲ့အချိန်တော်တော်များများက ဒီနေရာကလေးမှာ ကုန်ဆုံးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ စိတ်၊ အတွေး၊ အချိန်တော်တော်များများကို ဒီနေရာလေးမှာ မြှပ်နှံပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ၊ တနေ့ နဲ့ တနေ့မတူညီတဲ့ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေ၊ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မူတွေ၊ စာတွေ့ နဲ့မရနိုင်တဲ့ အသိညဏ်ပညာတွေကို ဒီနေရာလေးမှာ မွေးဖွားပါတယ်။
အလုပ်ဝင်လို့၂လအကြာ တနေ့ က Jerrod က Are you looking for full time job ? We can hire you. လို့ ဆိုလာတော့ ဝမ်းသာသွားတယ်။ But...
It depends on project budget. ဆိုတော့ တဝက်ပဲ ဝမ်းသာလိုက်ရတယ်။ ခုက 1 year contract ။ တရုတ်ကြီး Peter ဆို ဒီရုံးမှာ လုပ်တာ ၁၅နှစ် ရှိပြီ။ တချို့ တွေဆို အနှစ်၃၀ ရှိပြီတဲ့။ နောင်နှစ်စီးပွားရေကောင်းပါစေ။ HRSG များများရောင်းရပါစေ။
တယ်တော်တဲ့ နာပါလား။ နာကွ...။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဒီလောက်တော်မှန်းတောင် မသိဘူးဆိုတော့ မကြီးက ပြုံးနေလေရဲ့ ။ အဖေသာ ကြားရင်တော့ စန်းထွန်းနှယ် သားအဖချင်းတောင် ကပ်ကြွားနေပြန်ပြီလို့ပြောမှာ မြင်ယောင်သေး။
မရှိတော့လည်း ဒုက္ခ။ ရှိပြန်တော့လည်း ကုန်ပေါက်။ ကိုင်း ခြေထောက်ကို ဘီးတပ်ပေးလိုက်စမ်းမယ်။
ထိုင်ဝမ်တရုတ် လင်းကို တွေ့ တော့
San Htun : လင်း ...HTC က ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ မလား..
Peter မှ ဝင်ပြောသည် : ဟုတ်တယ်..
San Htun : HTC ကုမ္ပဏီ CEO ပီတာချူး (Peter Chou) က မြန်မာကွ...
L. Tsai : ဟမ်..ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း..
San Htun : သူက မန္တလေးမှာ မွေးပြီး တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀ကျော်က သူတို့ မိသားစု ထိုင်ဝမ်ကို ပြောင်းသွားတာ။ အမေရိကားမှာ ကျောင်းတက်ပြီး ပြန်လာတော့ HTC ကုမ္ပဏီ CEO ဖြစ်လာတယ်။
HTC 's CEO - Peter Chou ( burmese nationality)
နာတို့မြန်မာနိုင်ငံသားက နင်တို့ထိုင်ဝမ်က နာမည်ကြီး HTC ကုမ္ပဏီရဲ့CEO ကွ..ဟာ..ဟ
စန်းထွန်းတယောက် ကွကို ကွပြီး မဆီမဆိုင် ဘလိုင်းကြီး ကြွားခဲ့ပါကြောင်း ..
မေ ၁၉၊ ၂၀၁၂။
Birds are singing the songs
Flowers are blossoming with sweet fragrance
Clouds are wandering in blue sky
When I glance at your face...
Stars are twinkling in dark sky
When I hear your giggling...
When soft breeze blows your tresses...
Moonbeam had fallen from the sky
When you stand beside me..
Startled out of my reverie byawhiff of jasmine
When I find myself in the present of your...
Victories and honours are laid at your feet
Just humble tokens of my love...
Except the touch of your hand or
a tender look in your eyes...
I just listened this musical video at facebook. I don't remember who shared it. But it is really awesome and soothing. I just want to share with my friends. Some may dislike and feel boring. Anyway, different people have different tastes.
(Paragraphs 6, 7, 8 and 9are from KING AMONG MEN written by KHIN MYO CHIT and others are mine . That book is her masterpiece about King Anawrahta and First Burma Kingdom.)
အိပ်မပျော်သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုဖက်လိမ့်လိုက် ဒီဖက်လိမ့်လိုက်နေရာက တခူးခူး အသံပေးကာ အိပ်ပျော်နေသည့် ညီငယ်ရဲရဲကို အမှောင်ဝိုးတဝါးထဲမှ လှမ်းကြည့်ပြီး ပြုံးမိသည်။ အိပ်မပျော်နိုင်သူများသည် အပူအပင်မရှိ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သူများကို အားကျသည်။ မနာလိုစိတ်တောင် ဝင်မိသည်။ အိပ်မပျော်သောညသည် ရှည်တာလွန်းလှသည်။ ဇွတ်မှိတ်ကာ အိပ်မပျော်သည့်အဆုံး ရဲရဲ မနိုးအောင် တံခါးကို အသံမမြည်အောင်ပိတ်ပြီး ဧည့်ခန်းဖက် ထွက်လာခဲ့သည်။ စာအုပ်ဖတ်လျှင်တော့ မျက်လုံးစင်းကာ အိပ်ချင်လာမည်။ အဲ... အရမ်းစိတ်ဝင်းစားဖို့ ကောင်းသည့် စာအုပ်ဆိုလျှင်တော့ အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်ကာ မျက်စိတောင် ပိုကျယ်လာနိုင်သည်။
ကျွတ်... အရေးထဲ ဖတ်နေကျ စာအုပ်တွေက အိပ်ယာဘေးမှာ။ အခန်းထဲပြန်ယူစိတ်က မရှိ။ ရွှန်းမြသော လရောင်က ဧည့်ခန်းထဲ ဖြာကျနေသည်။ အိမ်ရှေ့ တံခါးဖွင့်ကာ ဝရန်တာမှာ သွားရပ်တော့ လေနုအေးလေး တိုက်ခတ်လာသည်။ ခဏမျှ ပူလောင်အိုက်စက်မှု သက်သာသွားသည်။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ပြည့်ပြည့်ဝန်းဝန်း သာနေသည့် လမင်းကြီးကို တွေ့ ရသည်။ သြော် ဒီနေ့ကဆုန်လပြည့်နေ့ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားခဲသော မိန်းကလေးကို ဖျပ်ခနဲ အဝေးကနေ တွေ့ လိုက်ရသည်။ တချိန်က ကျွန်တော် အသည်းနင့်အောင် ချစ်ခဲ့ဖူးသော မီးငယ်......
ဆယ်တန်းဖြေပြီးခါစ မီးငယ်နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်တွင် ဆုံတွေ့ ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မီးငယ်နေထိုင်သော ရက်ကွက်သို့ကျွန်တော်တို့မိသားစု ပြောင်းရွှေ့ လာသောအခါ အိမ်နီးနားချင်းမို့မျက်မှန်းတန်းမိသည်။ သွက်လက်ချက်ချာသော မီးငယ်၏ ဆွဲငင်အားတွင် ကျွန်တော် အရည်ပျော်သွားသည်။ မီးငယ်နှင့် သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး ၃လအကြာမှ ကျွန်တော့်ရည်းစား နေရီ့ နှင့် ဇာတ်လမ်းပြတ်ခဲ့သည်။ မီးငယ် တောင်းဆိုမှုကြောင် ရည်းစားဟောင်း နေရီ့ အိမ်ရှေ့ ကို မျက်နှာပူပူဖြင့် ဖြတ်လျှောက်ရဖူးသည်။ မီးငယ်၏ အပြုံးသည် ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဘယ်အရာနှင့်မျှ မလဲနိုင်သော ဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ မီးငယ်သည် တခါတရံ ထိုကဲ့သို့ဆိုးနွဲ့ တတ်သော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။
ဆယ်တန်းဂိုက်ဖြစ်သော မီးငယ်၏ စာသင်ရာနေရာများသို့အကြိုအပို့ဘယ်တော့မှ ဘာအကြောင်းနှင့်မှ မပျက်ကွက်စေရ။ ဖိနပ်ဆိုင်လေးကို သူငယ်ချင်းတယောက်နှင့် စပ်တူဖွင့်ထားသော ကျွန်တော့်အတွက် မီးငယ်လိုအပ်သော အချိန်တိုင်း မီးငယ်ဘေး အမြဲတမ်း ကျွန်တော်ရှိနေခဲ့သည်။ အကိုတွေကြား တွယ်ရာမဲ့သော မီးငယ်အတွက် ကျွန်တော်သည်သာ မီးငယ်၏ တွယ်တာရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက မြဲမြံသော အချစ်များကို မြင်ကြဟန်တူသည်။ မီးငယ် အဖေ၊ အကိုများသည် မီးငယ်နှင့် ကျွန်တော့်ကို သဘောတူသည်။ ကျွန်တော့် အမေကတော့ မီးငယ်ကို သဘာကျပုံမရ။ ကျွန်တော် ချစ်မှန်းသိတော့လည်း အလိုက်သင့် ဆက်ဆံရှာသည်။
မီးငယ် တက္ကသိုလ်တက်တော့ မီးငယ်တို့ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကျွန်တော့် ခြေရာ ထပ်နေခဲ့သည်။ မီးငယ်၏ ကို ကို တကျောင်းလုံးက မသိသူမရှိ။ မီးငယ်သူငယ်ချင်းများက ကျွန်တော့်ကို မီးငယ်အိုပါးဟု ခေါ်ကြသည်။ မီးငယ် ဖြစ်ချင်သည်၊ လိုချင်သည်များကို တချက်မှ မျက်နှာမညှိုးစေရ။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်သည် မီးငယ် မောပန်းသမျှ ခိုနားဖို့ဖြစ်သည်။ မီးငယ်အတွက် ကျွန်တော်သည် ချစ်သူတယောက်၊ အကိုတယောက်၊ မိတ်ဆွေတယောက်၊ သူငယ်ချင်းတယောက် ဖြစ်သည်။ မီးငယ်သည် ကျွန်တော့်ကို တွယ်တာလွန်းသော မိန်းကလေး ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော မီးငယ်၏ အကိုများက နိုင်ငံခြားတွင် ကျောင်းတက်ရန် စီစဉ်လာချိန် ကျွန်တော် ခွင့်မပြုလျှင် မီးငယ် မသွားမှန်း သိသော်လည်း ကျွန်တော် တားမြစ်ငှာ မစွမ်းနိုင်ခဲ့။ အမြဲတတွဲတွဲ ရှိနေရာကနေ ခွဲခွာသွားတော့ ကျွန်တော့်မှာ ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မီးငယ်နှင့် တွေ့ ရဖို့အင်တာနက်ဆိုင် ကျွန်တော် ပိုထိုင်ရသည်။ မီးငယ်၏ အခက်အခဲများကို ကြားရသောအခါ မီးငယ်ဘေးနား ကျွန်တော်ရှိချင်ခဲ့သည်။ မျက်ရည်ဝေ့နေသော မီးငယ်ရဲ့မျက်ဝန်း၊ ကို့ ကို လွမ်းလိုက်တာဟု ဆိုလာသော မီးငယ် စကားသံကို ကြားရတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ နာကျင်မိသည်။ ခဏလေးပါ၊ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ပြန်ခဲ့မယ် ပြောသော်လည်း ကျွန်တော် မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ မီးငယ် ပြန်အလာ စောင့်နေရင်း ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားနိုင်သည်။ မီးငယ်နှင့် နီးဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားမှ ဖြစ်တော့မည်။
ကျွန်တော် မီးငယ်ဆီ ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေချိန် မီးငယ်လည်း စာမေးပွဲတွေ အောင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ တပတ်တခါမှ နှစ်ပတ်တခါ၊ နှစ်ပတ်တခါမှ တလတခါ တွေ့ ချိန်တွေ နည်းလာသည်။ ကျောင်းအားချိန် အချိန်ပိုင်းလုပ်ရင်း မီးငယ် အပိုဝင်ငွေရှာရသည်။ မီးငယ်နောက်လိုက်ရန် ကြိုးစားနေမှန်း သိသောအခါ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများက ဟားကြသည်။ ဟားချင်သလောက် ဟားကြပစေ ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါ။ ရူးလောက်အောင်မှ သူတို့မချစ်ဖူးတာ။ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နှစ်နှစ်အကြာမှ မီးငယ်နေထိုင်သောတိုင်းပြည်ကို ကျွန်တော် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မီးငယ် ရုတ်တရတ် အံ့သြဝမ်းသာသွားအောင် ဖုန်းဆက်သောအခါ မီးငယ် အံ့သြသွားသည်။ သို့ သော် ဝမ်းသာပုံတော့ မရ။ မအားလို့နောက်မှ လာတွေ့ မည် ဆိုသည်။ ကိစ္စမရှိပါ ကျွန်တော် မီးငယ်နေသောမြို့ကို ရောက်နေလေပြီ။
မီးငယ်ဆီ ဖုန်းဆက်တိုင်း မအားလို့လာမတွေ့ နိုင်ဟု ဆိုသောအခါ ကျွန်တော် စိုးရိမ်လာသည်။ အရင် မီးငယ်စိတ်နှင့်ဆိုလျှင် အပြေးရောက်လာမှာ သေချာပေါက် ဖြစ်သည်။ တခုခုတော့ မှားယွင်းနေပြီ။ နောင် သိရသည်က မီးငယ်မှာ ရည်းစားရှိနေပြီ။ မီးငယ်တို့ ထက် အတန်းကြီးသည်။ မီးငယ်ချစ်သူသည် မီးငယ်နှင့် လိုက်ဖက်သော တည်ကြည်သော လူငယ်တယောက်ဖြစ်သည်။ မီးငယ်ကို မေးကြည့်သောအခါ မီးငယ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါဟု ဆိုလာသည်။ ခွင့်လွှတ်သည် ဆိုသည်မှာ အပြစ်လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်ရအောင် ဘာအပြစ်မှ မီးငယ် လုပ်မထားပါ။ မီးငယ်ပိုင်သည့် ဘဝလမ်းကို မီးငယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ မသာယာသည့် ကျွန်တော့်ဘဝထဲ မလာဖြစ်တာလည်း ကောင်းပါသည်။ မီးငယ် ဆုံးဖြတ်ချက် မမှားပါ။ မှန်ကန်သည်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးသော မီးငယ်နှင့် မီးငယ်ရည်မှန်းချက်ကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်သော ကျွန်တော်တို့ဝေးကွာရခြင်းသည် မီးငယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်၊ ကျွန်တော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်၊ ကံကြမ္မာကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော် မီးငယ်ကို အပြစ်မမြင်ရက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကို သိကြသူများက မီးငယ်ကို အသည်းခွဲခဲ့သူ၊ ရက်စက်လွန်းသူဟု မြင်ကြသည်။ ကျွန်တော် မပြစ်မမြင်မှန်းသိတော့ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးကြပြန်သည်။ ကျွန်တော် သူတို့ ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပါသည်။ ကျွန်တော် နစ်နာသည်ဟုထင်ကာ သူတို့ခံပြင်းနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မီးငယ်နေရာမှာ သူတို့ ဆိုလည်း မီးငယ်ကဲ့သို့ ပင် ရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ ညီမငယ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို တခါက မချင့်မရဲ ရေရွတ်ဖူးသည်။ မီးငယ်သာ ကိုလေးကို လက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုလေး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေအတွက် နှမြောစရာကြီးဟု ဆိုသည်။ ကျွန်တော် မီးငယ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့သော အရာများသည် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မီးငယ်ဖက်မှ မချစ်သောနိုင်သောအခါ နစ်နာသည်၊ ဆုံးရှုံးသည်ဟုလည်း ကျွန်တော် မမြင်ပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မီးငယ် ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခဲ့တာတော့ အသေအချာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့မတွေ့ ကြသော်လည်း ကျွန်တော်လိုအပ်မည်ထင်သော အရာများကို သူငယ်ချင်းများကတဆင့် ပို့ ပေးသည်။ ကျွန်တော် ငြင်းမည်ကြံသော်လည်း ကို့ ကျေးဇူးတွေ မီးငယ်အပေါ်မှာ ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ခံပါဟု ဆိုလာသောအခါ ကျွန်တော် မငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့။ မီးငယ် မင်္ဂလာပွဲကို ကျွန်တော် တက်ရောက်ဖို့မသင့်ဟု ထင်သည်။ မီးငယ်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို မဖိတ်ပါ။ တချိန်တုန်းက မီးငယ်နှင့်တူသော သမီးလေးတယောက် ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသည်။ မီးငယ်ခင်ပွန်းနှင့် ချွပ်စွပ်တူလှသော သားသား မီးငယ် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မြန်မာအများစုဆုံလေ့ရှိသော နေရာတွင် မီးငယ်တက္ကသိုလ်တုန်းက တွဲခဲ့သော သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော မေ၊ ဇူးဇူးတို့ နှင့် တခါတရံ ဆုံမိသည်။ အားနာဟန်တူသော အမူအယာများကို မြင်ရတော့ ကျွန်တော့်မှာ ရယ်ချင်စိတ်ကို အတင်းမြိုသိပ်ထားရသည်။ ဘာမှမဖြစ်သလို နေပြသောအခါမှ သူတို့သက်သာရာ ရသွားတတ်သည်။ ကာယကံရှင်များက ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဘေးလူများက မျက်နှာထားရ ခက်ဟန်တူသည်။
မီးငယ်နှင့် ကျွန်တော် ရေစက် တကယ်ကုန်သွားပုံရသည်။ တမြို့ထဲနေကြသော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ မတွေ့ မိ။ ဒီနေ့ မှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အဝေးကနေ ဖျပ်ခနဲ တွေ့ လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မီးငယ်သည် အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲ။ တသားမွေးကာ တသွေးလှနေဆဲ။ မီးငယ်အမျိုးသားသည် မီးငယ်ကို အတော်ကြင်နာသည်။ သာယာပျော်ရွှင်သော မီးငယ်တို့မိသားစုလေးကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းမိသည်။
ရှေ့ ဆက်မယ့် ဘဝရဲ့ လမ်းထဲ အဆင်ပြေပါစေကွယ်...။
♪ ♫ ခဏလေးပါ ချစ်သူရယ်...သေချာဆက်ဆက် စောင့်နေကွယ်...
လုံခြုံမှုအပြည့် မပေးနိုင်တဲ့..မသာယာတဲ့ ငါ့ဘဝအိမ်ထဲ မလာဖြစ်တာ ကောင်းပါတယ်...
နင် ထားရစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်...♪ ♫ ♩ ♬
အသည်းခွဲခဲ့တဲ့သူလို့အပြစ်မပြောရက်ဘူးကွယ်...
ရက်စက်လွန်းတဲ့သူလို့မစွပ်စွဲရက်ဘူးကွယ်....
နင်ပိုင်တဲ့ နင့်ဘဝရဲ့လမ်းပဲ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်...
မင်းက မချစ်တော့ပေမယ့်...ငါ မုန်းမရဘူးကွယ်...
ငါ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ့မယ်..အဆင်ပြေပါစေကွယ်...♪ ♫ ♩ ♬
တကယ်ဆို အချစ်နဲ့ဘဝဟာကွယ်...
အကြွေစေ့ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို အမြင်မှာကျောချင်း ကပ်နေလည်း...
ဆန့် ကျင်ဖက် အရပ်သို့ လှည့်... ရွှေမှုန်ကြဲတဲ့လမ်းတွေထက်...
နင် လျှောက်လှမ်းသွားလိုက်ပါကွယ်...♪ ♫ ♩ ♬
နင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သမျှလည်း...မမှားဘူး..မင်း မှန်ပါတယ်...
ရက်စက်လွန်းတဲ့သူလို့မစွပ်စွဲရက်ဘူးကွယ်...
ငါ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ့မယ်..အဆင်ပြေပါစေကွယ်..♪ ♫ ♩ ♬
ရှေ့ ဆက်မယ့် ဘဝရဲ့ လမ်းထဲ အဆင်ပြေပါစေကွယ်...
ရှေ့ ဆက်မယ့် ဘဝရဲ့ လမ်းထဲ အဆင်ပြေပါစေကွယ်... ♪ ♫ ♩ ♬
(မီးငယ်သည် အစ်မတော် မီးမီးငယ် နှင့် လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည် :P။ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ နာမည်၊ ဇာတ်လမ်း တိုက်ဆိုင်မှုများရှိပါက နားလည်ပေးစေလိုပါသည် :D။ ဓာတ်ပုံများကို ဂူဂယ်မှ ယူပါသည်။ ပို့ စ်နှင့် လိုက်ဖက်မည်ထင်သော ရန်နိုင်အောင်၏ အဆင်ပြေပါစေ သီချင်းကို Youtube မှ ယူပါသည်။)
ခုတလော Sales & Marketing Dept မှ လူများ ပရောဂျက်တခုရဖို့အသည်းအသန် လိုက်နေကြသည်။ ရွှေမြန်မာကုမ္ပဏီ၏ ၅၀မီလျံတန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံ ( Power Plant) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း တင်ဒါအတွက် ဖြစ်သည်။ အာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်သော တရုတ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံများကြားတွင် ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတလက်ထက်တွင် အာရှကျားတကောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ကောင်းမွန်စနစ်ကျသည့်အပြင် ဘဏ်စနစ်သည်လည်း ခိုင်မာသည်။ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တဖွဲဖွဲဝင်လာသည်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် မြှင့်လာသည်။
Coal Fired Generation နည်းသည် ကျောက်မီးသွေးကို လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်သည်။ ကျောက်မီးသွေး ရှားပါလာသည်နှင့်အတူ လေထုထဲသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှင့်နှုန်း၊ စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများကလည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် စိုးရိမ်ရသည်။
Gavin Power Plant - 1300 MW
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တွေ့ ရှိခြင်းက Natural Gas Electricity Generation ၏ အစ ဖြစ်သည်။ ဈေးသက်သာသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ က ကျောက်မီးသွေးနေရာ ဝင်ယူလာသည်။ Simple Cycle တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အား လောင်ကျွှမ်းခြင်းဖြင့် ရေကို အပူပေးကာ လျှပ်စစ်ဓာတ် ထုတ်ယူသည်။ ပိုထွက်လာသော အပူဓာတ်ကို လေထုထဲသို့ထုတ်လွှင့်သည်။ ကျောက်မီးသွေးထက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်မှုနှုန်း နည်းသော်လည်း လေထုညစ်ညမ်းထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာ (Pollution Control Equipment) လိုအပ်သည်။
Combined Cycle တွင် ပိုထွက်လာသော အပူဓာတ်ကို လေထုထဲသို့မထုတ်လွှင့်ဘဲ ရေကို အပူပြန်ပေးကာ လျှပ်စစ်ဓာတ် ထုတ်ယူသည်။ ထိုကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သော Heat Recovery Steam Generator ( HRSG) နည်းလမ်းကို ၁၉၆၂ တွင် Vogt Power International မှ ပထမဆုံး တီထွင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် HRSG ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခန့် သာ ရှိသည်။
Nuclear Electricity Generation တွင် ယူရေနီယံ အသုံးပြုကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်သည်။ ၂၀၀၇ အထိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လည်ပတ်နေသော နူးကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၄၃၉ ခု ရှိသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို နူကလီးယားစွမ်းအင်မှ ရရှိသည်။ ၂၀၁၁ ဂျပန်ငလျင်နှင့်အတူ ဖူကူရှီးမား နူးကလီးယား ဓာတ်ရောင်ခြည်စိမ့်မှုက တကမ္ဘာလုံးကို နူးကလီးယားအန္တရာယ် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သည်။ လည်ပတ်နေသာ နူးကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို တတ်နိုင်သမျှ ပိတ်ပစ်ဖို့ဖိအားပေးသည်။
Renewable Energy တွင် ပြောင်းဖူးရိုးတို့ လို စွန့် ပစ်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ် ထုတ်သည်။ နေရောင်ခြည်သုံး ဆိုလာနည်းကလည်း တနှစ်ပတ်လုံး နေရောင်ခြည်ကောင်းမွန်စွာ ရရှိသော နိုင်ငံများနှင့်သာ ကိုက်ညီသည်။ လေရဟတ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ခြင်းသည် လေတိုက်နှုန်းမြှင့်သော နေရာများတွင် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပြီး ငှက်များ သေကြေပျက်စီးသည်။ မြစ်ချောင်းများကိုပိတ်ကာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူခြင်းကလည်း မြစ်ကောခြင်း၊ သက်ရှိများ၏ ဂေဟစနစ် ပျက်စီးခြင်း၊ ရေကြီးနိုင်ခြင်း အန္တရာယ် ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် Combined Cycle သည် အကောင်းဆုံးနည်း ဖြစ်သည်။
Alstom SA ၊ Nooter/Eriksen Inc ၊ နယ်သာလန်မှ NEM ၊ ကိုရီးယားမှ Doosan တို့ နှင့် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ထိုပရောဂျက်ကို ရရှိခဲ့သည်။ စက်ရုံတည်ဆောက်ရေးသည် ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း မဟုတ်သော်လည်း ရွှေမြန်မာကုမ္ပဏီမှ တောင်းဆိုလာသောအခါ တည်ဆောက်ရေးပိုင်းကိုပါ တာဝန်ယူရသည်။ သင့်တော်သော မြစ်ကမ်းဘေးနေရာကို ပညာရှင်များဖြင့် တိုင်ပင်ပြီး ရွေးချယ်ရသည်။ မြန်မာပြည်၏ စံချိန်စံညွှန်း၊ ဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီအောင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ရရှိအောင် မြန်မာပြည်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်ဆန်တိကျသည်။
ပရောဂျက် အတည်ပြုသည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရသည်။ Supply Management ဌာနမှ HRSG အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးတာဝန်ယူသည်။ Quality Assurance ဌာနမှ ထိုဝယ်ယူသောပစ္စည်းများ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရသည်။ I & C ( Instrumentation & Control) ဌာနသည် HRSG အား ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်သော Valves ၊ Gates ၊ Transmitters များ ဝယ်ယူရသည်။ ME ( Mechanical Engineer) ဌာနမှ ဖိအားတွက်ချက်မှု ၊ FEA ( Finite Element Analysis) သုံးကာ ဘွိုင်လာများ ကောင်းမွန်စွာ ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်ရေး တာဝန်ယူသည်။ Pipe Stress Engineering ဌာနသည် လိုအပ်သော ပိုက်ဒီဇိုင်းများကို ဝယ်ယူသူ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရသည်။
Horizontal HRSG with vertical tubes
Structural Engineering ဌာနသည် HRSG ၏ လိုအပ်သော စတီးဒီဇိုင်း၊ ဂျိုင့်များ ဆက်သွယ်ခြင်း အပြီးသတ်ဒီဇိုင်းဆွဲရသည်။ CAD ဌာနသည်2D ၊3D မိုဒယ် ရေးဆွဲရသည်။ Thermal Engineering ဌာနသည် အပူမျက်နှာပြင်၊ ပိုက်များ၏ အတွင်းဒီဇိုင်း၊ ဘွိုင်လာ၏ လုပ်ဆောင်နှုန်းကို ရေးဆွဲရသည်။ Product Engineering ဌာနသည် ပစ္စည်းအားလုံး စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရပြီး Project Engineering ဌာနသည် ပရောဂျက်တခုလုံး ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရသည်။ Estimating ဌာနသည် Customer မှာယူသော ဘွိုင်လာ၏ ကုန်ကျစရိတ် ၊ ပရောဂျက် အစမှသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို တွက်ချက်ရသည်။ Sales & Marketing ဌာန၊ Aftermarket & Field Services ဌာနသည် Customer များနှင့် ညှိနှိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရပြီး လည်ပတ်နေသောစက်ရုံများ ပြသနာတခုခုရှိလျှင် ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကိုယ်တို့Central Engineering ဌာနသည် ဌာနအားလုံး၏ လိုအပ်သော ဆော့ဝဲများကို ရေးသားပေးရသည်။
လပေါင်းများစွာ ပင်ပန်းခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးတွင်တော့ ရွှေမြန်မာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံကြီးကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာလူမျိုးအားလုံး ဂုဏ်ယူချစ်ခင်ကြသော ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ မြို့တော်အသစ်တည်ဆောက်မည့်အစား မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံတခု၊ တနသာင်္ရီကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံတခု တည်ဆောက်မည်။ ပိုလျှံပါမှ နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ ရောင်းချမည်ဟု ဆိုသည်။ ထားဝယ်စီမံကိန်းကြောင့် တနသာင်္ရီကမ်းရိုးတန်းသည် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အချက်အချာ ဖြစ်လာသည်။ သင်္ဘောများသည် စင်္ကာပူထိ ခုတ်မမောင်းတော့ဘဲ တနသာင်္ရီဒေသမှတဆင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဖက်သို့သွားကြသည်။ တနင်္သာရီသည် စင်္ကာပူကို ကျော်တက်သွားသည်။
စပိန်ကုမ္ပဏီ Initec Energia မှ MPX ကုမ္ပဏီအတွက် ဘရာဇီးတွင် တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးသော Parnaiba ပရောဂျက်၊ ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Siemens မှ စင်္ကာပူတွင် တည်ဆောက်သော Tuas ပရောဂျက်၊ ရွှေမြန်မာကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်သော ရွှေမြန်မာပရောဂျက် အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုနေ့ လည်စာ တည်ခင်းသည်။ တောင်အမေရိက အစားအစာ၊ စင်္ကာပူမှ နာမည်ကြီး Prawn Noodles နှင့်အတူ မြန်မာအစားအစာ ဝက်သားပုန်းရည်ချက်၊ ချဉ်ပေါင်ကြော်တို့ ဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့သည်။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အခါသမယနှင့် တိုက်ဆိုင်နေ၍ မုန့် လုံးရေပေါ်၊ ရွှေရင်အေးတို့ ဖြင့် ကျွှေးမွေးသောအခါ အချိုကြိုက်သော အမေရိကန်များ အကြိုက်တွေ့ ခဲ့သည်။
စက်ရုံသို့သွားရောက်လည်ပတ်သောအခါ စက်ရုံလည်ပတ်ပုံအကြောင်း စက်ရုံမှုးမှ ရှင်းပြသည်။ စက်ရုံမှ စွန့် ပစ်ရေကို သန့် စင်ပြီးမှ စွန့် ထုတ်ပုံ၊ လေထုထဲသို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို သက်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း စွန့် ပစ်ပုံ၊ ရေအသွေးညံ့လျှင် ပိုက်များ ပျက်စီးသောကြောင့် ဘွိုင်လာထဲ ရေမထည့်မှီ PH ပမာဏ ထိန်းညှိပုံ၊ ငလျင်လှုပ်လျှင်ဖြစ်ဖြစ် အရေးပေါ်အရေးအခြေအနေတွင် စက်ရုံလည်ပတ်မှု ရပ်တန့် သွားအောင် စီမံထားပုံ၊ အပူချိန်လွန်ကဲလာလျှင် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းစနစ်၊ စက်ရုံမှ ဘွန်း..ဘွန်း..ဘွန်း မြည်သံ လျော့နည်းအောင် နည်းစနစ်ရှာဖွေနေပုံများကို ရှင်းပြသည်။
ဘွိုင်လာကို အမှတ်တမဲ့ သွားထိမိသည့်အခါ
ပူပေမပေါ့။ ကွန်ပျူတာဖွင့်လျက် အိပ်ပျော်နေတာ ဘထ္ထရီတုံးကြီးကို သွားထိမိတာကိုး။ တော်သေးတယ် နီရုံ နီသွားလို့ ။ တကယ့် ဘွိုင်လာနဲ့ များ ထိလို့ ကတော့...။
ငါ့နဲ့ နော် Orientation ပြီးသွားတာတောင်မှ အိမ်မက်ထဲ ထည့်မက်နေရတယ်လို့ ...အဟက်..အဟက်...
မေ ၆၊ ၂၀၁၂။
(HRSG နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက် မှားယွင်းမှုရှိပါက စာရေးသူ၏ အားထုတ်မှု ပေါ့လျော့မှုကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများကို ဂူဂယ်နှင့် ကုမ္ပဏီ Presentation Slides များမှ ရယူပါသည်။)